‘माओवादीलार्इ कसैले पनि माइनस र इन्कार गर्न सक्दैन’ | Indrenionline.com
‘माओवादीलार्इ कसैले पनि माइनस र इन्कार गर्न सक्दैन’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विशेष अन्तर्वाता
वाम गठबन्धनको जितलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ र ?
दोस्रो र तेस्रो शक्ति मिल्दा पहिलो शक्ति हुनु स्वाभाविक हो, यो जितसँग विचार वा दर्शनको साइनो छैन भन्ने टिप्पणी पनि गरिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ र ?
(यो गठबन्धनले स्थायित्व र समृद्धि ल्याउँछ भन्ने आधार के रु किनकि तपाइँहरूसँग जुटभन्दा बढी फुटको इतिहास छ।
फुट्न त सबै फुटेका छन्। ०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि कम्युनिस्टहरू फुट्न थाले। यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ, राष्ट्रिय आयाम पनि छ। १९ सालदेखि अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा हामी ठूला पार्टी पुगेकै हो। खाली कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य मात्रै यसमा छैन। कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा त छँदै छ, साथसाथै देशमा नयाँ राजनीतिक वातावरण, जनतामा नयाँ आत्मविश्वास पैदा गर्ने र छिटोभन्दा छिटो आर्थिक प्रगतिमा लैजाने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। जनअनुमोदन पनि भइसकेकाले यसले लामो दूरी पार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मैले महसुस गरेको छु। आउने केही महिना र हप्ताभित्र प्रायः सबै कम्युनिस्ट एकै केन्द्रमा आउँछन्। शान्तिप्रक्रियामा आउनेबित्तिकै मैले पार्टीमा वामपन्थी एकताको प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ र सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो। त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन झन्डै ११ वर्ष समय लाग्यो। तर, यो कम्युनिस्टका लागि मात्र होइन, आम नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो।
तपाइँको पार्टीको स्थिति पनि राम्रो भएको छ। यसरी हेर्दा एमालेसँगको गठबन्धनको योगदान कति रह्यो र ?
वाम गठबन्धनले सकारात्मक ढंगले योगदान त गर्‍यो नै १ एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता संयोजन समिति नै बनेको छ। पछाडिको अर्को पाटो पनि बिर्सनु हुँदैन। माओवादी फेरि एकताबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको थियो एक वर्षदेखि। त्यसको सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको थियो। स्थानीय तहको चुनावमा कतिपयलाई लागेको थियो(माओवादी त चौथो वा पाँचांै हुन्छ वा हराउँछ। हामीले सावित गर्‍यौं कि माओवादी केन्द्र यस्तो शक्ति हो(जसलाई कसैले पनि माइनस गर्न, इन्कार गर्न वा अस्वीकार गर्न सक्दैन। तल गाउँसम्म पनि माओवादीको संगठन रहेछ भन्ने स्थानीय तह चुनावले पुष्टि गर्‍यो। राजनीतिक भूमिकाका हिसाबले पार्टी र नेतृत्व एक नम्बरमै थियो, र छ। तर, संगठन हिजो केही बिग्रेकै थियो। विभाजनको पीडा थियो। तर, यो क्रमशः उकालो लाग्दै थियो। फेरि ठीक त्यही बेला एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन बनेपछि र पार्टी एकताको संकल्प गरेपछि गुणात्मक मद्दत गर्‍यो।
माओवादी एक्लैले यो अभियानको नेतृत्व गर्न पाएको भए जस लिन पाइन्थ्यो भन्ने लाग्दैन र ?
त्यस्तो लाग्दैन। ती मुद्दा स्थापित गर्नुभन्दा पहिला नै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ भन्ने मलाई त्यतिबेलै लागेको थियो। शान्ति–सम्झौताकै बेला एमाले–माओवादी एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनिएको थियो। दोस्रो कुरा, माओवादीले उठाएका मुद्दा त स्थापित भइ नै सके। हामीले युद्धमा उठाएका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता त राष्ट्रका मुद्दा भइ नै सके। मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। संविधान बनाउँदा ती सबै मुद्दा मुख्यतः माओवादीका हुन्। त्यसकारण मलाई एमालेले जित्दा पनि माओवादीले जितेजस्तो लाग्छ, कांग्रेसले जित्दा पनि माओवादीले जितेजस्तो लाग्छ भनेर धेरैचोटि भनेको छु। त्यो भन्नुका पछाडि गम्भीर अर्थ छ। किनभने हिजो यी मुद्दामा सबैको समर्थन त थिएन नि १ हामी एक्लै लड्नुपरेको थियो। अहिले त जसले जिते पनि गर्ने काम त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै लागि हो। अब फर्केर कोही राजतन्त्रमा जाने त छैनन्। कोही धर्म सापेक्षतामा जाने पनि छैनन्। कोही अब महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वबाट पछि हट्न सक्छ त रु हामी दलित महिला भनेर लड्यौँ। अहिले एमाले आउँदा पनि महिला नै आउँछन्। कांग्रेस आउँदा पनि महिला नै आउँछन्। मलाई गर्व छ कि यो हाम्रो लडाइँको महान् जित हो। सबै अधिकार सम्पन्न हुनेतिर गयो। मैले त्यसरी हेर्दिनँ जसरी मानिसले हेर्छन्। मेरो हेराइ कस्तो छ भने जसले जिते पनि क्रान्तिले जित्यो, परिवर्तनले जित्यो, न्यायले जित्यो। उत्पीडनका विरुद्ध संघर्षले जित्यो भन्ने लाग्छ।
जनआन्दोलनका मुख्य घटकहरू सँगै जान पाएको भए संविधान कार्यान्वयन अझ सजिलोसँग हुन्थ्यो। अब खुम्चिएको कांग्रेसबाट त्यो सहयोग प्राप्त होला ?
वामपन्थीको सरकार बन्न लाग्यो, मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने टीकाटिप्पणी छ। के भन्नुहुन्छ ?
कांग्रेससमेत भएर सबै मिलेर बनाइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानप्रति गठबन्धन सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छ। त्यसकारण कम्युनिस्टहरू मिल्यो भने अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कुरा त्यति नै असत्य र झुटो कुरा हो जति असत्य ६० वर्ष पुगेपछि कम्युनिस्टहरूले त मान्छे मार्छन् भनेर भनिन्थ्यो। इतिहास हेर्नुभयो भने कम्युनिस्टहरू जति उदार र लोकतन्त्रवादी छन्, कांग्रेसले आफूभित्र त्यो सिद्ध गर्न कहिल्यै पनि सकेको छैन। बीपीको बेलाको कुरा छाडिदिऊँ पछिको हेर्नुभयो भने कांग्रेसले आफूलाई व्यवहारमै लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर सिद्ध गर्न जरुरी छ। कांग्रेसलाई जनताले पटक–पटक अवसर नदिएको होइन नि १ बहुमत नै दिएको हो नि।
कांग्रेसलाई बहुमत त जनताले दिएको हो नि १ तर पार्टी नै फुट्यो। त्यस्तै अवस्था फेरि वाम गठबन्धनभित्र नहोला भन्न सकिन्छ र ?
को हो अबको प्रधानमन्त्री ?
वामपन्थी सरकार बनेपछि जनताले के फरक महसुस गर्छन् रु मन्त्रालय भागबन्डा, मन्त्रीहरूको ठूलो संख्या, मन्त्रालय फुटाउनेजस्ता प्रवृत्ति ?
यी सबै हुन्छन् भन्ने आधार के छ रु यी सबै जे भन्नुभएको छ, त्यो सरकारले खल्तीबाट दिने त होइन। ती आधार बनाउन अब बन्ने सरकारले सक्छ ?
माओवादीले जातीय मुद्दालाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो। तर, अहिले तपाइँहरू एकसूत्रीय रूपमा आर्थिक समृद्धि भनिरहनुभएको छ। अब नेपालमा जातीय मुद्दाको राजनीति सकिएको हो ? के अब आर्थिक समृद्धि नै मूल नारा हो ?
ओलीको ‘राष्ट्रवादको भिजन’लाई निर्वाचनले अनुमोदन गरेजस्तो देखियो। अब बन्ने वामपन्थीहरूको सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग कसरी डिल गर्छ ?
हामीले कुनै पनि अतिवादी सोच्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। चाहे मधेसी राष्ट्रवाद भनेर अलगाववादतिर जाने कुरा होस् वा अरू कुनै। राष्ट्रवादको आ–आफ्नो व्याख्या हुन्छ तर कुराको चुरो आफ्नो भूगोलभित्र भएका सबै जाति, वर्ग र समुदायको एकता नै हो। त्यो एकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रवादी भयो। फुटलाई प्रवद्र्धन गर्‍यो भने त्यो राष्ट्रवादी हुँदैन। हामी वामपन्थी र कम्युनिस्टले एकतालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। राष्ट्रको एकता र स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिएका छौँ। तपाइँले केपीजीको कुरा गर्नुभयो, ठीक हो उहाँले एक ढंगले गर्नुभयो। तर, त्यतिबेला नाकाबन्दीमा म पनि छु त्यहीँ। हामी सँगै छौँ। वामपन्थीहरू सबैको राष्ट्रियताप्रतिको बुझाइमा इतिहासदेखि नै एउटा बुझाइ छ। देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनप्रतिको लगाव र निष्ठा, त्यो धेरै माथि छ। फेरि हामीले कसैसँग झगडा गर्न चाहेकाचाहिँ छैनौँ। हाम्रा ठूला छिमेकी छन्। हामी भूपरिवेष्ठित छौँ। तर, छिमेकीहरूले पनि हामीमाथि कुनै खालको दबाब र हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। आम नेपाली जनताको पनि त्यही चाहना छ। २१ औँ शताब्दीको नयाँ सन्दर्भमा विश्वमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। यस्तो बेलामा भारत र चीन दुवैसँग असल छिमेक सम्बन्ध बनाउनेतिर नै वामपन्थी सरकारको जोड हुन्छ। पहिला–पहिला राजामहाराजाहरूले राष्ट्रियता भनेको देशभित्रका जनतालाई फुटाउने, एउटा व्याख्या गर्ने, खस आर्यको वा हिन्दु अतिवादको राष्ट्रियतालाई नै राष्ट्रियता हो भन्नेजस्तो व्याख्या गर्थे। अनि कसैलाई भारतपरस्त भनिदिने, कसैलाई चीनपरस्त बनाइदिने गर्थे। चीनपरस्त र भारतपरस्त भनेर पार्टीहरूलाई फुटाइदिइसकेपछि आफ्नो शासन लम्ब्याउँथे।
कोही भारत समर्थक वा कोही चीन समर्थक वा विरोधी भनेर त अहिले पनि सुनिन्छ नि १ तर हाम्रो विदेशनीति बनाउन वामपन्थी सरकारले कहिले सुरु गर्छ ?
हरेक पटक वामपन्थीको सरकार बन्दा निजी क्षेत्र सशंकित देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
निजी क्षेत्र सशंकित हुनुपर्ने कुनै आधार छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरीकन आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरामा वामपन्थी गैरवामपन्थी सबै सहमत नै छन्। दोस्रो कुरा, तपाइँले हेर्नुभयो भने वामपन्थीको नेतृत्वको सरकार भएको बेला सबैभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएका छन्। मेरो नेतृत्वको सरकार हुँदाकै कुरा गर्ने हो भने पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीहरू भएका छन्। निजी क्षेत्रका संघसंस्था छन् जस्तोः उद्योग वाणिज्य महासंघ। उहाँहरूका आवश्यकता तुरुन्तातुरुन्तै क्याबिनेटबाट पास गरेर पूर्ति गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। उनीहरूले हामीलाई त बरु माओवादीसँग काम गर्दा पो सजिलो भयो, निजी क्षेत्रका काम फटाफट अगाडि बढे भन्ने प्रतिक्रिया दिए। कम्युनिस्टहरूले निजी क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउँछन् भनेको त झन् बढी उदारतापूर्वक निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम वामपन्थीले गरे भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकरीले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कतिपय प्रतिनिधिहरूसँग भनेको सुनिएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०८:४२
Previous: इन्द्रजितको जितमा झुम्यो देउखुरी (हेर्नुहोस फोटो फिचर)
Next: प्रधानमन्त्री देउवा र उपप्रधानमन्त्री महरा बिच संवाद , केही दिनमा दाङ अस्थायी राजधानी तोकिने